Tag: onye ọchụnta ego | Martech Zone
Tag: onye ọchụnta ego
APE: Onye edemede, Onye mbipụta akwụkwọ, Onye ọchụnta ego
Na nkwadebe maka mkparịta ụka anyị na Guy Kawasaki, azụrụ m otu APE: Onye edemede, Onye mbipụta akwụkwọ, Onye ọchụnta ego-Otu esi ebipụta Akwụkwọ. M na-agụ ọtụtụ ndị Guy Kawasaki akwụkwọ na kemgbe a ofufe n'ihi na ezi oge ụfọdụ (ijide n'aka na-akụ n'ime Ajụjụ ọnụ nke mbụ ọ tweeted m… na-akpa ọchị akụkọ!). Akwụkwọ a dị ezigbo iche, agbanyeghị… ọ bụ akwụkwọ ntụzi-aka zuru ezu banyere otu esi edepụta akwụkwọ gị. Ndị edemede Guy
Na-arụ ụka megide akụkọ ihe mere eme na mbubata mbata
Fraịde, Machị 26, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Erik Deckers
Mụ na enyi m na-akparịta ụka na-atọ ụtọ, Chad Myers nke 3 Hats Marketing, na-ekwurịta etu akụnụba ọrụ ugbo anyị na Industrial Revolution siri mee ka omume ọrụ anyị ugbu a. Dị ka tebụl QWERTY kọmputa anyị (ezubere ha ka ọ ghara ịrụ ọrụ nke ọma ka igodo typewriter agaghị arapara, mana anyị na-eji ha taa na ngwaọrụ ndị na-agaghị ada,), anyị na-eche echiche na ọ bụ site na 100 ruo 1,000 afọ ( na ndị ọzọ)